Fubag TI 2600: निर्दिष्टीकरण, फोटोहरू र समीक्षाहरू
होमपेज, उपकरण र उपकरण
यदि तपाईंको स्वामित्वमा डचा छ भने, त्यसपछि, निश्चित रूपमा, कम से कम एक पटक बिजुली ब्याकअप स्रोत कसरी खरीद गर्ने बारे सोचे। यदि साइट केन्द्रीय पावर ग्रिडसँग जोडिएको छैन भने, पेट्रोल जेनरेटरले घरको बिजुली उपकरणहरू प्रयोग गर्दा आवश्यक समाधान हुनेछ। यदि तपाइँ मौद्रिक रूपमा डचा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं जेनरेटरको साथमा, सभ्यताको फाइदाहरू त्याग्न सक्नुहुन्न।
यस्तो उपकरण बिजुली आपूर्ति को आयोजन को एक तर्कसंगत तरीका बन जाएगा, यो सस्ती छ, र यो एक लामो समय को लागि सेवा गर्न को लागि तैयार छ। पेट्रोलमा जेनरेटरले देने को शर्तहरु मा सानो भार संग सामना गर्न सक्षम छ, जो बिजुली उपकरणहरुको विस्तृत सूची संग क्रमांक नहीं छ। यदि तपाइँ यस्तो उपकरण खरीद गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले मोडेल Fubag TI 2600 तिर ध्यान दिनुपर्छ। मोडेलमा प्रतिक्रियासँग परिचित भएपछि तपाइँ सही छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
पेट्रोल जेनरेटर Fubag TI 2600 को विवरण
यो उपकरणमा 42,300 रूबलहरूको प्रभावशाली मूल्य छ, तर मूल्य उल्लेखनीय विशेषताहरूद्वारा उचित छ। जेनरेटरले आकस्मिक वा रिजर्भको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कोटहरू र निजी घरहरूको अवस्थामा। इकाईले निर्माण स्थलहरूमा आफैलाई राम्रो साबित गरेको छ र साथसाथै विधानसभाको काममा।
यन्त्रले खराब मौसमको स्थितिमा उत्कृष्ट गुण प्रदर्शन गर्दछ, जब यो माछा मार्ने यात्रा वा एक वृद्धिमा उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ। Fubag TI 2600 ले 12 गाविसको उत्पादन गर्दछ, जसले तपाईलाई कारको लागि कम्प्रेसर र बैटरिहरु चार्ज गर्न उपकरण सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ।
माथि उल्लेखित उपकरणहरू एक म्यानुअल स्टार्टर र एक तुल्यकालिक विकल्प हो। उपकरणको वजन 26 किलोग्राम हुन्छ। यो पावर प्लाटर एक पर्यटक जनरेटर हो, जसमा 12 वी को उत्पादन छ। डिजाइनमा तेल सेन्सर छ। उपकरण चार स्ट्रोक इन्जिनको खर्चमा काम गर्दछ। सञ्चालनको समयमा ईन्धन खपत 1.1 l / h को स्तर पुग्छ।
स्टेशन प्रयोग गर्दा, तपाईं शोर सुन्नेछ 60 डीबीमा। यन्त्रहरूको आयाम 564 x 317 x 453 मिमि हुन्छ। Fubag TI 2600 सँग ब्याट्री समावेश छैन। डिजाइनमा एक तेल ट्यांक हो, जसको मात्रा 0.5 लिटर छ। 220 V मा, अधिकतम बिजुली 2.6 किलोवाट छ। उपकरण सुरक्षा आईपी 23 को डिग्रीसँग मेल खान्छ । ईन्धन स्तर सूचक र चक्र, साथ साथै ह्यान्डलहरू, जुन अन्तिमको यातायातमा मद्दत गर्न सक्दछन्, जनरेटरले गर्दैन। तर तपाईं ईनवर्टर भोल्टेज मनिटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले सञ्चालनलाई सरल बनाउँछ। ईन्धन ट्यांकमा 4.6 लीटर क्षमता छ। यन्त्रमा कुनै नियन्त्रण स्वचालन छैन।
मोडेलको बारे समीक्षाहरू
जब उपभोक्ताहरूले Fubag TI 2600 जनरेटरको मोडेललाई विचार गर्छन्, उनीहरू विशेष गरी केही सकारात्मक विशेषताहरूलाई ध्यान दिन्छन्, तिनीहरूमध्ये:
जानकारीपूर्ण प्यानल को उपस्थिति;
थप फारम कारक।
पहिलो फीचरको लागि - सूचनात्मक प्यानल, त्यसपछि यसको मद्दतले उपभोक्ता तेल स्तरको निगरानी गर्न सक्षम हुनेछ। उपकरण overheat छैन, किनकि यो ओभरलोड को स्तर को सूचक संग सुसज्जित है, यह आपको डिवाइस को सावधानी से सावधानी से उपयोग करने की अनुमति देता है ताकि यह सुधारे और लंबे समय तक कार्य करेगा।
एक अतिरिक्त लाभ प्रयोगकर्ताहरूले दुई आउटलेटहरूको उपस्थितिलाई विचार गर्छन्, जसले एडेप्टरहरू बिना धेरै यन्त्रहरू जडान गर्ने सम्भावनाको ग्यारेन्टी दिन्छ। 75% को लोडमा, उपकरण लगभग3घण्टाको लागि दौडिनेछ, जुन ग्राहकहरु अनुसार, एक राम्रो सूचक हो। एक अतिरिक्त फायदा एक चार स्ट्रोक इन्जिन तेल प्रयोग गर्ने सम्भावना छ, जुन एसई स्तर र माथिको तुलना गर्दछ।
मोडेलको लागि निर्देश पुस्तिका
यदि तपाईंले Fubag TI 2600 पावर प्लाटर मनपराउनु भयो भने, तपाईंले आफूलाई प्रयोग गर्नु अघि निर्देशनहरूसँग परिचित हुनु पर्छ, यसले गल्तिहरूको प्रयोग गर्ने उपकरणको लामो समयदेखि बचाउनेछ। तपाईंको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि म्यानुअल पढ्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि, उपभोक्तालाई थाहा हुनुपर्छ कि निकासले हानिकारक ग्यास समावेश गर्दछ। यसैले, पावर प्लाटर भित्रको सञ्चालन गर्न सकिदैन। यसलाई स्विच गर्न अघि, वाटरटिजनमा स्विच गरिएको सुनिश्चित गर्न सुनिश्चित हुनुपर्छ।
यदि उपकरण हटाइएको क्षेत्रहरूमा स्थापित गरिएको छ भने, सुरक्षा नियमहरू सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ। जब पावर स्टेसन चलिरहेको छ, मफलरलाई हटाउँदछ र यसलाई बन्द गरे पछि मात्र ठुलो हुन्छ। त्यसकारण, यसलाई छुनु भन्दा पहिले। इन्जिन छोडिन्छ इन्जिन छोडिनु पर्छ। निकास प्रणाली जम्मा हुनेछ र काम पूरा भएपछि केही समयको लागि तातो रहनेछ। जलाउनबाट बचाउनको लागि, तपाईंले बिजुलीको पौडीमा देख्न सक्ने विशेष लेबलहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
इन्वर्टर प्रदायक फिबग टआई 2600 पेट्रोल प्रयोग गर्दछ, जुन विस्फोटक र अत्यधिक ज्वलनशील तरल हो। यन्त्रलाई भरपूर भित्री क्षेत्रहरूमा राख्नु पर्छ, इन्जिन विच्छेद हुनु पर्छ। धुआं र स्पार्कहरूको विभिन्न स्रोतहरू र साथसाथै धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति बाहिर निकाल्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि ग्यालेसो गल्तीमा गल्ती भएको फेला पर्यो भने, यो हटाइनेछ।
कामको लागि तयारी
यदि तपाई इन्जिनको जीवनलाई कम गर्न समस्याको सामना गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाइँलाई additives संग तेल प्रयोग गर्नुपर्छ। दुई-स्ट्रोक इञ्जिनको लागि सेवा जीवन र तेलमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। चार स्ट्रोक ईञ्जिनको लागि तेलको भण्डारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन प्रीमियम गुणस्तर छ। यसको संरचनामा डिटर्जेंट एडिटिभहरू हुनुपर्छ। खरीद गर्दा, तपाईंले अनुपालनको प्रमाणपत्रको उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्छ।
क्षेत्रमा औसत तापमान दिइयो, यो आवश्यक भिषाको तेल को चयन गर्नु आवश्यक छ। तेल स्तर जाँच गर्न, यो बोल्ट अपस्काउन र रखरखावको लागि बायाँ आवरण हटाउन आवश्यक छ। अर्को, मास्टरले जांच को बाहिर निकालन र रगों संग पोंछ गर्नु पर्छ। तेलको स्तर जाँच्नु आवश्यक छ र डुबस्टिक को स्थानमा घुसाउनुहोस्। यदि स्तर डिपस्टिकको अन्त हो भने तपाईले तेललाई उच्च स्तरमा थप गर्नु पर्छ।
यदि पेट्रोल जेनरेटर Fubag TI 2600 ले कम तेल स्तरमा काम गर्नेछ, यसले इन्जिनको क्षति हुन सक्छ। यदि तेल स्तर महत्वपूर्ण स्तर भन्दा कम हुन्छ भने, आपातकालीन स्टप प्रणाली स्वचालित रूपमा सक्रिय गरिनेछ। बिच्छेदबाट बच्नको लागि, तेलको स्तरको लागि बिजुली संयोजन नियमित रूपमा चिनो लगाइनेछ।
यदि तपाईंले Fubag TI 2600 जनरेटर खरिद गर्नुभयो भने, तपाईंले ईन्धन स्तर पनि जाँच गर्नुपर्छ। भर्तीको लागि, पेट्रोल AI-92 प्रयोग गरिन्छ। यो अनलिमिटेड वा थोडा उत्सर्जित पेट्रोल चयन गर्न मनपर्छ, किनकि यसले दहन कक्षमा कम्तीमा भण्डारण छोड्छ।
यदि ईन्धन स्तर धेरै कम छ भने, ईंन्धन ट्याङ्क भर्नु पर्छ। तपाईंले यसका लागि पेट्रोल र तेलको मिश्रण प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। ईन्धन ट्यांकमा प्रवेश गर्न पानी, धूल र माछालाई अनुमति नदिनुहोस्। त्यसपछि त Fubag TI 2600, दिशानिर्देश पुस्तिका को माथि प्रस्तुत गरिएको छ, एक लामो समय लामो हुनेछ।
गाईन व्हीलबारले दुई-पहेलो सार्वभौमिक
बांस वलपेपर - सजावट को एक उत्तम तरीका एक इंटीरियर
लेजर स्तर कसरी छनौट गर्ने छ: केही सिफारिशहरू
Chainsaw "शांत 180": गलत र मरम्मत, अपरेटिङ निर्देश
मोटोबल्क वा किनेटर - के राम्रो छ? कॉटेजहरूको लागि उपकरण
प्लास्टिक खिडकियां र सील गम्स को सेवा को जीवन
लेटेक्स पुटीन: गुण र आवेदन
कलेक्टर छल्ले? यो कुरा छैन
मलम जटिल: निर्देशन र संरचना
Herbicide "Lapis": बाली धनी को एक प्रतिज्ञापत्र
सर्गेड डोभट्टोभ, लेखक: जीवन र काम
सार्स को उपचार: आधारभूत नियमहरू
बच्चा दूध सूत्र Friso गोल्ड 1: प्रतिक्रिया। "Frisolac गोल्ड 1" र "Frisolac 1": संरचना, यसको विपरीत
विवरण संग जन्म मिति रूखहरू
एकपक्षीय र द्विपक्षीय निमोनिया
चिनियाँ व्यायाम ताई ची। प्राचीन चिनियाँ चिकित्सा व्यायाम। अभ्यास को विवरण
कारण र gallstones को लक्षण